Khabar Break - चारैतिरबाट इमान्दारिताको कुरा सुन्दा खुसी भएको छु : श्रेष्ठ
Thursday 19th of October 2017, 5:47:58 am
अन्र्तरवार्ता Published On: Tuesday 8th of November 2016, 06:00 PM
सडकमा भेटेको एक लाख रुपैँया सम्वन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरेका हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर २ सानोपोखराका का २४ वर्षीय युवा विश्वास श्रेष्ठ यतिबेला हेटौँडामा निकै चर्चाको शिखरमा छन् । सडकमा भेटिएको एक लाख रुपैँया प्रहरी मार्फत फिर्ता गरेपछि उनको इमान्दारिताको अहिले चर्चा भैरहेको छ । यसै सन्र्दभमा खबर ब्रेक डटकमको लागि धर्मेन्द्र दाहालले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी
एकाएक सडकमा एक लाख देख्दा झसङ्ग हुनुभएन ?
– म मेरो कार्यालय शिखर इन्सुरेन्सबाट एउटा कामको लागि नविल बैंक तर्फ जाँदै थिए । एक्कासी नबिल बैंक अगाडी एक रोकेर राखेको मोटरसाईलको पाङ्ग्रा नेर पैसाको बिटो देखे, मोटरसाइकलसँगै एक ब्यक्ति उभिएको देखे, मैले सोचे उक्त रकम उनकै हुनुपर्छ, उनलाई झरेको थाहा नहुन सक्छ भनेर टिपेर पैसा दिन खोजे तर उनले हैन भने ।
त्यसपश्चात के गर्नुभयो ?
- उनले रकम हैन भनेपछि मलाई हल्का डरको अनुभव भयो । अनि मैले नजिकै रहेको ३ जना ब्यक्तिलाई पनि तपाईहरुको रकम हो भनेर सोधे तर उनीहरुले पनि हैन भनेपछि मलाई झन समस्या भयो । मैले सोचे आखीर यो प्रसा कस्को रैछ ? कुनै गरिबले झारेको रैछ भने त उसको जीवनकै सवाल हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान गयो, त्यसपछि मैलै नविल बैंकको सेक्युरेटी गार्डलाई रकम कोहि खोज्न आएमा यो नंबरमा सम्पर्क गर्नु भनेर जानकारी गराए ।
पैसा आफै राखुजस्तो लागेन ?
बस्तवमा भन्ने हो भने मलाई उक्त सोच आउँदै आएर, आएको भए त म सुरुमानै कसैलाई नसोधी पैसा बोकेर हिडीहाल्थे नी, मेरो दिमगामा एउटा कुरामात्र आयो आखिर त्यो पैसा कस्को हो ? अहिले पैसा हराएको मान्छेको हालत कस्तो भैरहेको छ भन्ने कुरा आइरह्यो ।
प्रहरीसँग सम्पर्कचै के गरि गर्नुभयो ?
- हातमा पैसा र दिमागमा टेन्सन थियो, सोहि समयमा मैले एक प्रहरी भ्यान देखे, केहि कामको लागि प्रहरी निरिक्षक बेद गौतम केहि कामको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आउनुभएको रैछ, म सरासर प्रहरी भ्यान तर्फ गए अनि आफुले एक लाख भेटेको र उक्त पैसा हराएको ब्यक्तिलाई खोजेर उक्त पैसा दिनको लागि आग्रह गरे अनि म त्यहाबाट लागे । त्यसपछि पनि मलाई त्यो ब्यक्तिले सम्पर्क गरे कि गरेन भन्ने विषयले सताईरहेको थियो । त्यसको केहि समयपछि मलाई प्रहरी कार्यालयबाट फोन आयो र भनियो पैसा हराएको मान्छे फेला पर्यो एक पटक आइदिनुपर्यो ।
प्रहरी कार्यालय पुगेपछि के अनुभव भयो ?
- मलाई त्यो पैसा कस्को रैछ भनेर कौतुहलता लागेको थियो । प्रहरीले तपाईको एक लाख रुपैँया भेटेर फिर्ता गर्ने यिनै भाई हुन भनेर उक्त ब्यक्तिप्रति इसारा गरेपछि ति ब्यक्तिले मलाइ आएर हात समाउँदै धन्यवाद भन्दा उनी निकै अत्तालीएको देखे । मैले उनको अनुहारमा निकै खुसी देखे । म अहिले २४ वर्षको भए तर मलाई ति व्यक्तिले मेरो हात समाएर धन्यवाद दिएको क्षणजत्तिको आनन्द र खुसी कहिल्यै भएको थिएन् । मैले निकै राम्रो काम गरेजस्तो लाग्यो ।
तपाईको इमान्दारिताको विषयमा मकवानपुर सहित नेपालका धेरै समचारमाध्यमले प्रकाशन,प्रशारण गरेको छ , कस्तो लागेको छ ?
मलाई निकै ठुलो काम गरेकोजस्तो लागेको छ । अहिलेको समयमा पनि एक लाख रुपैँया भेटदा पनि फिर्ता हुदौरैछ, कस्तो इमान्दार ब्यक्ति रैछन भनेर चारैतिरबाट प्रसंशा सुन्दा खुसी भएको छु । अझ मेरो कारणले परिवार समेन निकै प्रफुल्लित भएका छन, यो मेरो लागि निकै खुसीको कुरा हो ।